Maamulka Juba: Shirka dib u heshiisiintu dib uma dhacayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 14 September 2014
Mareeg.com: Maamulka KMG ah ee Juba ayaa beeniyey in dib u dhac ku yimid xilliga uu furmayo shirka dib u heshiisnta beelaha Jubooyinka.
Madaxweyne ku-xigeenka Maamulkaas, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, ayaa meesha ka saaray warar laysla dhex marayo oo sheegaya in shirka dib u heshiisiinta beelaha Jubbooyinku waqtigii loo qabtay dib uga dhici doono.
Fartaag ayaa shaaciyey in maalinta Talaadada ee bisha September ay 16-ka tahay shirku furmi doono, isagoo intaas raaciyey in la diyaariyey goobta uu shirku ka furmayo iyo weliba goobaha loogu tala galay in ergooyinka la dejiyo.
Wufuud tira badan oo ka socota qaybaha kala duwan ee bulshada gobollada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gedo ayaa maalmihii u dambeeyey magaalada Kismaayo soo gaarey, qaar kalena waxaa la filayaa in 48-da saac ee soo socota ay ku yimaadaan.
Shirka dib u heshiisiinta Jubooyinka oo muddo badan la sugayey ayaa rajadiisu xoogeysatay kadib markii uu shirkaas aqbalay Barre Aadan Shire oo horay ula dagaallamay maamulka Juba.
Daacish (IS) oo madaxa ka jartay muwaadin Ingiriis ah